User talk:Ninjastrikers - ဝစ်ရှင်နရီ
မင်္ဂလာပါ Ninjastrikers။ ဝစ်ရှင်နရီမှကြိုဆိုပါတယ်။ ဝစ်ရှင်နရီ အခြေခံကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အကူအညီလိုရင် ဝစ်ရှင်နရီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဝင်မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ရေးသားချင်တယ်ဆိုရင် sandbox မှာ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝစ်ရှင်နရီမှာ အပီအပြင်ပျော်ရွှင်ပါစေဗျား။ (ဝီကီအဘိဓာန်ရောင်းရင်းများ)
Welcome to Myanmar Wiktionary! I hope you enjoy improving and editing this Wiktionary project. These pages are especially useful for those who are literate in Burmese. However, even experienced Wikipedians who don't know any Burmese have helped out with other things, like 'Interwikis' and updating images from Commons, etc. So don't be afraid to improve the wiki any way you can! Remember, someone else can always come later and fix any changes you make that are not perfect.
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၈၊ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ (UTC)
Reversing my changes to wrong translation[ပြင်ဆင်ရန်]
To Admin - Ninjastrikers,
You should not reverse back to wrong translation. The word is an Arabic word and media distorted the true meanings and this is reflected in English Wiktionary as well.
jihad - struggle and striving
" Holy war " would be al-harb al-muqadas - this phrase doesn't exist in the classic Arabic language.
Please leaveanote why if do reverse it back again.
Okay. I see. Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၅၃၊ ၄ ဧပြီ ၂၀၁၇ (UTC)
ESEAP Conference 2018[ပြင်ဆင်ရန်]
Thank you and we hope to see you soon. --Pilarbini (ဆွေးနွေး) ၀၉:၁၆၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=User_talk:Ninjastrikers&oldid=836317" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မတ် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။